Hong Kong: artista mandoro ireo sarinjavatra ho fanehoana ny fitakiana pôlitika, Winnie ilay bera, ary vata-pifidianana nandritra ny Andron’ny Avelo · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong: artista mandoro ireo sarinjavatra ho fanehoana ny fitakiana pôlitika, Winnie ilay bera, ary vata-pifidianana nandritra ny Andron'ny Avelo
Sary avy amin'ny fankalazana ny Andron'ny Avelo tao Hong Kong
MpanoratraThe Stand News
Voadika ny 24 Septambra 2020 5:54 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Deutsch, Français, Español, русский, 日本語, English
Vola taratasy nasiana ny sarin'i Carrie Lam, lehiben'ny mpanatanteraka ao Hong Kong. Sary an'ny Stand News, nahazoana alàlana.
(Fanamarihana; mandeha mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra raha tsy asiana fanamarihana manokana)
Ny lahatsoratra eto ambany dia fandikàna natao avy amin'ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny fiteny shinoa tao amin'ny Stand News tamin'ny 01 Septambra 2020. Naverin'ny Global Voices navoaka araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Nandritra ny Fetiben'ny Avelo Noana natao tamin'ny 1 sy 2 Septambra, nisy vondrona iray nahitàna ireo artista avy ao Hong Kong nanararaotra io fotoana io mba hanehoan-dry zareo ny hasosorana pôlitikan-dry zareo.
Ao anatin'ny fomba amam-panaon'ny shinoa, Volan'ny Avelo ny volana Jolay manontolo amin'ny tetiandro ampiasàna ny volana, raha ny andro faha-efatra ambinifolo na ny faha-dimiambinifolo amin'izay volana izay kosa ny Andron'ny Avelo.
Ny angano milaza fa, mandritra ny Volan'ny Avelo (antsoin'ny Malagasy koa hoe ‘matoatoa’), mivoha ny vavahady manasaraka ny fanjakan'ny ratsy (helo) ary mivenjivenjy ety amin'ny tontolon'ny velona ireo avelo ratsy fanahy. Ny sasany manararaotra io fotoana io mba hitsidihana ireo havan-tiana – na hamaliana faty ny fahavalon-dry zareo. Amin'ny Andron'ny Avelo ny velona no manana fahafahana mifampiresaka amin'ireo efa nodimandry.
Anatin'ny kolontsaina marobe ao Shina, mandoro zavamanitra ny olona, joss paper (fetan-taratasy namboarina ho vola ifanakalozana amin'ny fanahy, dorana ho toy ny fanatitra), akanjo natao tamin'ny taratasy, volamena ary hatramin'ny telefaona finday ho an'ireo fanahy tonga mitsidika mandritra ny Volan'ny Avelo. Io fomba fanao nentindrazany io dia heverina ho toy ny fanehoana fanajàna an'ireo razambe niaviana — ary fanatosahana ireo fihetsehampo voageja tao anaty ho an'ireo efa nodimandry.
Tamin'ity taona ity, ny 14 Jolay Andron'ny Avelo amin'ny taonan'ny volana dia ny 1 Septambra, ary nisy andiana artista avy ao Hong Kong nifamory tao amin'ny Nullah Road Garden ao Prince Edward mba handoro sy hanolotra ireo asatanan-dry zareo hatao fanatitra ho an'ireo fanahy mpivenjivenjy. Manana fironana pôlitika ilay fampisehoana, natomboky ny fikambanan'ireo mpanao asakanto ao an-toerana C&G Artparment hatramin'ny 2016; anarana nomena azy ny hoe “Fandoroana ny bokim-pitantanana” (燒數薄), izay midika ihany koa hoe “Alikao ny reninao” amin'ny fiteny kantôney mahazatra.
Kacey Wong nanamboatra fehezan'entana roa fiarovana ho an'ny fanahiny any aoriana. Sary an'ny Stand News, nahazoana alàlana.
Ilay artista Kacey Wong nanamboatra fehezan'entana roa ho endrika fanoherana, ahitàna aroloha miloko mavo sy arotava fiarovana amin'ny entona, ankoatra ireo fitaovana hafa fampiasan'ireo “Mpanao majikan'ny Afo” — ireo mpanao hetsi-panoherana mitoratoraka baomba mandrehitra — ary ireo “Tarika Mpamono Setroka” — izay manokan-tena amin'ny fanajanonana ny asan'ireo baomba mandatsa-dranomaso. Ireo vondrona roa ireo dia samy teny anoloana avokoa rehefa nisy hetsipanoherana ny fanolorana olomeloka ho any Shina tao Hong Kong.
Nanazava ny hevitra tao ambadiky ny fanamboarana zavatra vita avy amin'ny taratasy i Wong :
Tena mitolagaga tokoa aho amin'ireo Mpanao Majikan'ny Afo sy ireo Tarika Mpamono Setroka. Manao sorona ny ainy ry zareo mba hiady hisian'ny demaokrasia sy ny fahalalahana eto Hong Kong (…). Eo amin'ny fiainana tena izy, tsy ananako ny fahasahiana hitoraka biriky na afo, saingy antenaiko fa ho afaka hanao izany aho aorian'ny fahafatesako. Izany no antony andoroako itony zavatra itony amin'izao fotoana izao mba ho an'ny fanahiko manokana amin'ny hoavy.
Toa an'i Kacey Wong, i Man Chan dia nanamboatra fehezana grenady gammon. Manazava izy:
Ao anatin'ny fiainana tena izy, be ny tsy fitovian'ny hery ara-tafika eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka, araka izany dia antenaiko fa afaka ampiasaina rehefa any amin'ny fiainan-tsy hita ireo baomba gammons mba ho fiarovana ny tena.
Ireo baomba gammons namboarin'i Man Chan. Sary an'ny Stand News, nahazoana alàlana.
Nanamboatra vatam-pifidianana niisa telo ilay artista Peggy Chan, mena, fotsy ary manga, loko manamarika ny revolisiôna frantsay milaza ny fahalalahana, fitoviana ary firahalahiana. Nolazain'i Chan fa ireo vatam-pifidianana dia maneho ny hetahetam-bahoaka hisian'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara.
Fanampin'izany, teo amin'ireo vata ireo dia nasiana tarehimarika telo manondro ireo tranga misy heviny lehibe ho an'ireo ao Hong Kong: 8964, 721 ary 831.
Vatam-pifidianana namboarin'i Peggy Chan. Sary avy amin'ny Stand News.
Ny tarehimarika 8964 dia manondro ny 4 Jona 1989, fotoana nanaovan'ireo olona iray tapitrisa tao Hong Kog hetsipanoherana ho setrin'ny famoretana nataon'ny governemanta shinoa ary nahafatesana olona maro nandritra ilay hetsika am-pilaminana nitakiana demaokrasia tao Beijing.
Ny 21 Jolay 2019 no andro nisian'ny fanafihana ny zotram-piarandalamby ambanin'ny tany tao Yuen Long, rehefa notafihan'ilay hetsika tselatra mpomba an'i Beijing ireo mpandeha fiarandalamby ambanin'ny tany, niaraka tamin'ny fitazanana fotsiny nataon'ny pôlisy.
Ny 831 dia manondro ny fanafihana ny zotram-piarandalamby ambanin'ny tany tao Prince Edward tamin'ny 31 Aogositra 2019, rehefa nanaovan'ny pôlisy mpandrava korontana herisetra ireo mpandeha tao nandritra ny ezak'izy ireo hisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana handeha hamonjy fodiana.
Nambaran'ilay artistra fa tsy hay fafàna ny fahatsiarovana ireny tranga ireny.
Tamin'ny herinandro lasa, olona 12 nisy nifandraisany tamin'ny tranga tao amin'ny zotram-piarandalamby tao Yen no nosamborin’ny polisy tao Hong Kong noho ny fiahiahiana azy ireo ho niketrika “korontana.” Isan'ireny voatàna ireny ilay mpanao lalàna, Lam Cheuk-ting, izay noratrain'ireo mpomba an'i Beijing tamin'io andro io. Ireo mpikatroka dia miampanga ny pôlisy ho miezaka mamerina manoratra indray ny tantara sy mamadika ireo niharam-pahavoazana ho toy ny mpamono olona.
Ilay artista Li Man-ho nanamboatra “Winnie ilay bera” lehibe mitazona kanonta izay. Matetika nampiasain'ireo mpampiasa aterineto io endrika iray avy amin'ny sarimiaina io mba hanesoana ny filoha shinoa Xi Jinping.
“Winnie ilay bera” namboarin'i Li Man-ho . Sary an'ny Stand News.
Betsaka karazana zavatra hafa vita tamin'ny taratasy nampitondraina hafatra pôlitika mafonja tao Hong Kong, toy ny aroloha, arotava ary diera – “ny fiantsoany ny diera ho soavaly” dia fomba fioteny shinoa midika hoe ny mainty lazaina fa fotsy. Ny diera anefa entina anondroana ny zava-marina. Maro tamin'izy ireny no nodorana niaraka tamin'ny taratasy ‘joos’ voatonta tao Hong Kong ary nasiana ny sarintavan'i Carrie Lam filohan'ny mpanatanteraka.
Nolazain'i Clara, mpandrindra ny C&G Artparment fa sehatra iray hilazan'ny vahoaka ny tsy hafaliany sy hamoahany ny fahasorenany ilay fampisehoana fanesoesoana:
Ao anatin'ny tontolo tena izy, tsy misy na iray aza mamaly ny fitakianay, noho izany tsy maintsy izahay mitady fantsona hafa, toy ny fifandraisana amin'ireo avelo any amin'ny fiainan-tsy hita.
Hong Kong (Shina) 24 ora izay